Kushambadzira Sarudzo Vakarasikirwa uye Vakundi ve2012 | Martech Zone
Chishanu, December 21, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Sezvo isu tichitanga kutarisa kumashure kune rakapfuura gore, ndinotenda zvakakosha kuti uve nemufananidzo wakajeka wezve marongero ekushambadzira ari kukura… zvese mukuzivikanwa nemhedzisiro. Izvo zvakare zvakakosha kuti utarise marongero aive nevashambadziri vachimhanya mumadenderedzwa uye vasinganyatso kuburitsa mhedzisiro yavaitsvaga kana yaidikanwa.
Kushambadzira Sarudzo Yakarasikirwa ne2012
Kudzoka kumashure - Imwe yenyaya dzedu dzinopokana uye dzakakurumbira muna 2012 yaizivisa izvozvo SEO yakafa. Nepo vazhinji veSEO vanachipangamazano vachingopenga mushure mekuverenga zita, vamwe vese vakanzwisisa kuti Google yakanga yaburitsa kapeti chaiyo kubva pasi pavo uye vaitofanira kumira kuyedza kubiridzira algorithm uye vatange kushandisa zvechokwadi kushambadzira kutyaira yavo yekutsvaga chiremera. Yakanaka kuGoogle uye yakanaka riddance kune SEO backlinkers.
QR Makodhi - ndokumbira unditaurire kuti vatofa. Iko kune kazhinji hunyanzvi hwekufambira mberi hunoita kunge mhinduro hombe dzatinogona kushandisa mukushambadzira. Nehurombo, mumaonero angu, QR kodhi dzaisambove imwe yadzo. Tine chinhu ichi chinoshamisa chinonzi Indaneti chinoita kuti zvive nyore kungo nyora mu URL kana izwi rekutsvaga uye uwane chero chaunoda. Panguva yandinoburitsa yangu smartphone, vhura yangu QR kodhi yekuongorora app, uye vhura woenda kuURL… ndingadai ndakangozvinyora mukati. QR macode haasi ekungobatsira, akashata futi. Ini handidi kuvaona pane zvangu zvekushambadzira zvinhu. Mhinduro irinani ipfupi URL, kutumira mameseji shortcode uye kuwana chinongedzo mumhinduro, kana kungova neyakanaka URL pane yako saiti kuti vanhu vazive kuenda kunoshanya.
Facebook Kushambadzira - Chokwadi chinoudzwa kuti ini ndinoshandisa kushambadzira kweFacebook uye ndakagamuchira mhinduro dzakanaka pane mamwe emakampeni atakaita. Mutengo wave wakaderera uye kune yakawanda yekutarisisa mikana… asi ini zvakadaro handigone kubatsira asi kunzwa kuti Facebook haisati yanyatso funga modhi yacho nazvino. PaFacebook nhare, rukova rwangu ruzere netani yezviziviso. Pawebhu, handigone kubatsira asi kufunga kuti dzimwe nguva ndinobhadhara kushambadzira kwezvakanyorwa mumadziro zvinofanirwa kunge zvichiratidza. Saka… Facebook iri kuviga zvirimo uye nekuita kuti ndiibhadhare. Yuck.
Google+ - Ini ndinoda kuti pane mukwikwidzi kuFacebook asi ini pachangu ndiri kutambura ipapo. Kana 99% yekutaurirana iri kuitika paFacebook, zvakandiomera chaizvo kushandisa simba muGoogle +. Google yanga ichiita basa rakakura pavanhu vane simba-rekushandisa kushandisa Google+ - ne kunyora uye bhizinesi rekugara kusangana. Vakawedzera zvimwe zvakanaka nenzvimbo nema hangout… asi nhaurirano munharaunda medu hadzisi kuitika ipapo. Ndinovimba zvinoshanduka.
Email Marketing - Bhizinesi rega rega rinofanirwa kuve neemail chirongwa. Mutengo wekuwana kubva kuemail uchiri mamwe akasimba kana uchienzaniswa nechero nzira yekutengesa. Ini ndinotenda kushambadzira neemail ndiko kurasikirwa asi, nekuti haisi kufambira mberi. Isu tichiri kufanirwa kugadzira makumi maviri emakore tafura marongero nekuda kwekusafambira mberi nevazhinji vanopa inbox application vanopa seMicrosoft Outlook. Zvinotaridza kunge zvingave nyore kunyora email, kupa nzira dzega, kushambadza, uye meseji yekupindura.
Kushambadzira Sarudzo Vakundi ve2012
Mobile Marketing - hapana zvachose kupokana pakukura kukuru uye kugamuchirwa kwemafoni efoni neInternet kuwana. Plain uye yakapusa, kana usiri kushandisa mari pawebhu nhare, nhare mbozha uye kunyatso kutumira mameseji, uri kuchengetedza chikamu chakakosha chemusika. Chinyorwa chimwe chete pane izvi… Ndiri kushanyira vabereki vangu kuFlorida izvozvi uye vangotenga maPhones. Paunofunga nezve avhareji mushandisi tekinoroji, ndinogona kukuvimbisa kuti havasi vabereki vangu.
Content Marketing - kukura kwema mobile apps uye kutsvagurudza nhare, kuenderera mberi kwekutorwa kweInternet senzira yekutsvagisa, uye kuenderera shanduko mukutenga maitiro kuronga, kutsvagisa nekutenga kuburikidza neInternet zvinoda kuti kambani yako ive nezvakatsigira kutsvagirana nekudyidzana kwevanhu. Nepo blogging yemakambani ichiramba ichibudirira sedanho repakati, dhizaini dhizaini, kugovana zvemagariro, eBooks, Whitepapers uye vhidhiyo vari kuwana mibairo iri nani kupfuura nakare kose.
Context Kushambadzira - unogona kucherechedza paMartech kuti kana iwe ukatarisa chaiwo zvinyorwa, iwe zvakare unoona chaiwo kushambadzira mubarutivi. Aya masimba ekushevedzera-kune-chiito akarongedzwa otomatiki… kuenzanisa zvirimo pamwe nekufona kuti uwedzere kuenderana, tinya-kuburikidza nemitengo, uye pakupedzisira shanduko. Dynamic matekinoroji ekupa irinani ruzivo rwakanangana nezviri mukati zviri kukura mukuzivikanwa uye kuva mutengo unodhura kumabhizinesi mazhinji.
Kukurudzira Kushambadzira - Misa yekushambadzira nzira dzinogona kunge dzakachipa pamutariri, asi hauna mhando yekukanganisa iyo yekubatanidza munhu anofurira. Isu tine kutsigira pane ino blog iri kuwana mibairo yakanaka - asi mabhenefiti acho anopfuura kungodzvanya. Isu tinoshanda nemakambani pazano ravo pachedu, isu tinosanganisa nyaya nezvadzo mumatauriro edu uye hurukuro, uye isu tave vatauriri vekunze kwezvigadzirwa zvavo nemasevhisi. Isu tine simba muindastiri uye aya makambani ekushambadzira tekinoroji ari kuda kuisa mari kune vateereri vedu. Mapurogiramu makuru matsva senge Shiri Diki ipa mafomu ekutsvaga nekutsvaga vateereri ava uye vanokurudzira.
Video Marketing - Mari dzemavhidhiyo akagadzirwa zvine hunyanzvi uye akagadziridzwa anoramba achidonha munyika. Chero ani ane smartphone anogona kuburitsa yakakwira resolution vhidhiyo - uye zvinoshandiswa senge iMovie zvinoita kuti zvive nyore kusimudzira nemumhanzi, kuwedzera mazwiovers, kuputira mune mamwe magirafu, uye kusundira kuYouTube uye Vimeo nyore. Vhidhiyo inzira inomanikidza uye inokwezva chikamu chikuru chevateereri vangangotore nguva yekuverenga.
Kutaura kwangu kunokudzwa mukundi is Twitter. Ndiri kuona hurukuro yakawanda pamusoro pekushandiswa kweTwitter nehurumende, zvitendero, vadzidzi nemamwe masangano zvinobudirira vachishandisa Twitter kutaurirana nevanhu vazhinji (pun yakanangwa Papa!). Twitter iri kunyange kubatana naNielsen pakupa zviyero zvekubatana zvetsika midhiya.
Chii chandakapotsa? Ungabvumirana nazvo here?
Tags: backlinkingBacklinksContent MarketingmamiriroeEmail Marketingfacebook kushambadziraGoogle +simbaKushambadzira VhidhiyoYeMahara neThebhu Kushambadziramobile marketingQR MakodhiTwitterTwitter Kushambadzira
2012 Internet & Nhare Dzemaitiro
Vakabvumirana kuti backlinks uye SEO yekare yakanga yakakakavadzana, asi ndinofunga kuti zvose zviri zviviri zvichine simba pamusoro pebasa remutengesi muna 2013. Zvechokwadi, dzinofanira kuvakwa zvakasikwa uye kutevera maitiro akanaka. That was a loosing strategy yevanoedza kubiridzira chete. Ini ndinotenda zvakare kuti vanokunda nzira yekushambadzira ye2012 vachaita
kubudirira muna 2013 uye kukosha kwavo kuchakura. Isu mu $ earch tinoda kuvandudza yakasarudzika vhidhiyo yekushambadzira. Iko hakuna nzira yekubudirira asi kana kambani ikagadzira inoshamisa branding ine inowirirana musanganiswa wemazano hapana nzira yekuve murashiki.